FALAM PENG CHUNGAH ZEIBANTUK HMANH A NGAH TILO, RALRIN AN PEK CANG HNA – The Chinlung Post
Ralrin Peknak Thusuah (7/2021) Pakhatnak. Chin National Organization/Chin National Defense Force (CNO/CNDF) hi 2021 kum April 13 ni ih rak din thokmiasi. Pahnihnak. CNO/CNDFadin thok ihsin Chin mipi humhim in, diklonak dodaltu kan tuanpi hriamkaibu dang pawl thawn dicatorship pohpoh an tluk theinak ding, Federal Democracy ngah theinak le Chin miphun hrang cangvaihnak pawl ah thungaithlakih cangvai rero tuasi.
Pathumnak. CNO/CNDF hi Chin phunpi hrangah cun zo vek bulpak, pawlkom pakhat khat ih hliahkhuh lomi dothlengnak pawlkomasiih, Falam peng sungih hriamkai-bu umsunasiih tlunah Falam peng le Chin ramkulh leng um Falam mipi zate le Chin miphunpi ih lungrualnak ngai poimawh zettu pawlkom khalasi. Palinak. Curuangah Chin ramkulh, Falam mipi khat le khat hmusual-aw ih lungrual lonak thlen theitu thil hrimhrim hrialnak ding hrangah Falam peng sungah cun CNDF siar lo ziangvek hriamhreikai pawlkom hman din lo dingin thungaithlak in ralrinnak kan pe-awasi.
သတိပေးထုတ်ပြန်ချက် (၇/၂၀၂၁) ၁။ ချင်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်၊ ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ (CNO/CNDF) ကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၁၃) ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ၂။ CNO/CNDF စတင်ဖွဲ့စည်းသည့် အချိန်မှစ၍ ချင်းပြည်သူများအား ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ကာ မတရားမှုကို တော်လှန်သော ညီနောင်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့များနဲ့အတူ အာဏာရှင်မှန်သမျှ ကျရှုံးရေး၊ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရရှိရေးနှင့် ချင်းအမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားမှုများကို အင်တိုက်အားတိုက် ပါဝင်ဆင်နွဲလျက်ရှိပါသည်။
၃။ CNO/CNDF သည် ချင်းအမျိူးသားရေးအတွက် မည်သည့်လူပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့အစည်းတခုခု၏ လွှမ်းမိုးမှုမျှမရှိသော တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီး ဖလမ်းမြို့နယ်အတွင်း တစ်ခုတည်းသော လက်နက်ကိုင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ ဖြစ်သည့်အပြင် ဖလမ်းမြို့နယ်နှင့် ချင်းပြည်နယ်ပြင်ပရောက် ဖလမ်းပြည်သူများအားလုံးနှင့် ချင်းလူမျိုးများ၏ သွေးစည်းညီညွှတ်မှုကို အထူးအလေးမြတ်ပြုသော အဖွဲ့အစည်းလည်း ဖြစ်သည်။ ၄။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ချင်းပြည်နယ်၊ ဖလမ်းပြည်သူအချင်းချင်း နားလည်မှုလွဲမှား၍ စည်းလုံးမှုပျက်ပြားကာ စိတ်ဝမ်းကွဲစေနိုင်မှုများ ရှောင်ရှားနိုင်ရန် ဖလမ်းမြို့နယ်အတွင်း CNDF မှလွဲ၍ မည်သည့်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့မျှ ဖွဲ့စည်းခြင်းမရှိရန် အထူးသတိပေးအပ်ပါသည်။ Credit:CNO
Cabiadang Relchih khawh asi. Taungzalat Center: Kan mi hna damnak caah tiin CCRT nih Taungzalat center cu onasi. Chin mi chungin kan mi hna chanhchuah rian tuan ding in Nurse pa6le doctors pa7an i pe. Upatnak ka pek hna. CCRT hi Chin miphun unau hna lungrual tein kan ral lian cem pakhatasimi doh nakding caah kan dirhmiasi. Harsatnak tampi cu hmu cia bu in, Pathian min in raltha tein kan kal lai.